Sidee ugu fudud ee ku Xareesan karaa Sharciga ku meel gaarka ee iga dhacay Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaSidee ugu fudud ee ku Xareesan karaa Sharciga ku meel gaarka ee iga dhacay
July 7, 2019 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 1
Mudo Sadax sano ayaa laga joogaa dadkii ugu horeeyay ee helay sharciyada ku meel gaarka ee ka kooban sadaxda sano kuwaasi oo hada u baahan in ay helaan ama Cusbooneysiistaan Sharcigaasi ka dhacay.
Sharciga ayaa noqon kara labo mid hadii aad buuxiso sharuudaha lagaaga baahnaa waxaa Xaq u leedahay in aad hesho Sharciga Degaanshaha Rasmiga hadii kale Waxay noqoneyso in lagu siiyo ku meel gaar kale.
Sidee ugu fudud ayaa ku Xareesan karaa Codsiga.
1 Labo mid ayaa ugu fudud si aad sharciga u xareeyso in aad gasho Webka laanta socdaalka isla markana furato foomka Codsiga ee quseeya Sharci balaarinta kaasi oo aad buuxineyso hadii aadan heyn warqado waxaa kuu wanaagsan in aad foomkaasi buuxiso.
2 Hadii aad heyso Warqado Cadeyn ah sida Shaqo ama iskuul ama Wax kale oo adiga kuu gaar ah Waxaa kuu fudud in aad Daabacato Foomka ku jira Webka ama Beejka laanta Socdaalka kaasi oo noqondoono 3 Warqadoo kadib aad buuxiso isla markana ku lifaaqdo warqadaha cadeenta aad heyso.
Hadirin Warqada Sadax bil kahor Waxaa muhiim ah Sadaxda bilood inta aad ku dhex jirto sidoo kale Codsiga ha dirin waqti danbe waayo waxaa halis ugu jirtaa in aad hakiso Shaqadaada ama waxyaabaha kale ee aad heyso inta go’anka aad sugeyso.
Fatima ahmed Abdirahman says: